Brezila: Mizotra ho amin’ny fihodinana faharoa ny fifidianana izay ho filoham-pirenena, miditra an-tsehatra ny media sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2010 10:44 GMT
Dilma, olona arovan'i Lula, avy ao amin'ny Antokon'ny Mpiasa (PT), dia nahazo ny 47% n'ny vatom-pifidianana, tsy nahatratra ny 50% ilaina mba hibatana ny fandresena amin'ny isam-bato ambony indrindra. Silva dia nahazo 19%, raha ilay mpifanandrina mivantana amin'i Rousseff kosa, i José Serra avy amin'ny Antoko Sosialy Demokraty, nahazo 32.6%..
Ny fihodinana faharoa, voatondro ho amin'ny 31 Oktobra dia nanome an'i Serra “vintana iray faharoa hifandahatra momba ny hoavy, ny anio ary ny omalinì'i Brezila”, araka ny nolazainy tamin'ireo mpamao gazety mpanadihady.
Mandritra izany, amin'ny fitorahana bilaogy ao amin'ny tranonkalam-baovao Carta Maior [pt], nampahatsiahy tamin'ny mpamaky i Emiliano Jose fa tsy fitsangatsanganana fakàna aina akory ny dingan'ny fametrahana demokrasia ao Brezila:
Na izany aza anefa, revolisiona tsy mbola nisy toa azy izy io teto Brezila, ary izany, raha mitohy, dia afaka hiantoka fananganana firenena iray tsy hoe hatanjaka ara-toekarena fotsiny, izay efa izany rahateo isika, fa koa, ary ambonin'ny zavatra rehetra, dia ho firenena mandàla fahamarinana, hanova ny fahazarantsika efa hatry ny taloha izay nirona kokoa nankany amin'ny fivangongoan-karena sy ny tsy fitoviana, izay mbola midangana miohatra amin'ny manerantany. Firenena iray izay ara-pomba demokratika dia manome lanja ny fidirana lalin'ny olom-pirenena Breziliana, izay misaina ny fandrosoana arakarakin'ny maro an'isa, fa tsy mijery mihitsy ny tombontsoan'ny vitsy an'isa. Ho an'ireo rehetra ireo, ilaina ny fidinantsika rehetra eny an-kianja, amin'ny fanindriana mafy ny maha-zava-dehibe ny tokony hampandehanana ny revolisiona toy izany.
Ao amin'io vavahadin-tserasera io ihany, nanampy i Emir Sader [pt] fa,
Nofinofy ny fiheverana ny fihodinana faharoa ho toy ny fifidianana hafa mihitsy. Fitohizan'ilay voalohany ihany io – saingy amin'ny fomba hafa fotsiny – amin'ny fisiana tendro roa mifandaka. Tsy maintsy i Lula mivantana amin'izay no mitantana ny fampielezan-kevitra, ka tokony hifantoka betsaka amin'ny fampitahàna ny governemantan'i FHC [Fernando Henrique Cardoso] sy Lula, tokony hanana tetika miavaka mihitsy izany ho an'ny fampandresena an'i Marina ary tsy maintsy ampitomboina ireo famoriam-bahoaka sy hetsika hafa natao ho an'ny daholobe – fanavahana misongadina an'ireo mpirotsaka roa..
Ny fanontaniana mahavaka saina mikasika ny anjara asa raisin'ny mpampahalala vaovao Breziliana [pt], mivandravandra be amin'ny fivangongoan-dry zareo sy ny fironany ara-politika, dia lohahevitra nahatonga adihevitra ihany koa. Manamafy i Jose,
Ireo gazety matanjaka izay an'ireo fianakaviana telo, na fianakaviana voafetra, dia nanao izay rehetra azon-dry zareo natao indray mba handetehana an'i Dilma Rousseff, amin'ny filazàna azy ho mpirotsaka ho fidiana tsy manana mpiara-miasa matotra ka miezaka foana mampiditra azy amina tantara ratsy.
Tamin'ny taona lasa, ny iray tamin'ireo gazety malaza eto Brezila, Folha de São Paulo, no tratry ny balan'ny fanakianana noho ny namoahany sary iray nikasika antontan-taratasy sandoka miresaka heloka bevava nataon'i Rousseff, mitoroka azy ho isan'ny nikotrika ny tetika fakàna ankeriny ny Minisitry ny Vola teo aloha, Antonio Delfim Netto, tamin'ny 1969. Fakùna ankeriny izay nokasain'ny elatra farany havia amin'ireo mpiady anaty akata nisy an'i Dilma nefa tsy tanteraka akory satria herinandro vitsy nialoha ilay hetsika dia voasambotra daholo ireo mpikambana tao amin'ilay vondrona. Nolavin'i [pt] Dilma ny filazana azy ho nifandray na nahalala mikasika ilay fakàna ankeriny0.
Raha ny fijerin'ilay mpitoraka bilaogy Eduardo Guimarães [pt], ireo mpampahalala vaovao mahazatra dia nanangana “fiampangàna mahafaty” hamelezana an'i Dilma mandritra ny fampielezan-keviny. Hoy izy nanampy,
Miaraka amin'ity elanelana goavana be amin'ny fampiasan'ny mpirotsaka tsirairay ny fampitam-baovao mahazatra ity, na iza na iza mpanaramaso vahiny, raha tsy mahafantatra tsara hatrany ifotony ny zava-misy ara-politika eto Brezila, dia mety hiteny fa tsy manam-bintana ho voafidy i Dilma. Goavana loatra mantsy ny elanelana misy eo aminy sy ireo mpifanandrina roa hafa ao anatin'ity fifanandrinana ity. Raha mba efa nanana rafitra tsy miankina natanjaka ara-bola isika , mety mba efa nandray fepetra ny Fitsarana momba ny Fifidianana nanakatona TV sy Fampielezampeo maro noho izy ireny nanao fampielezan-kevitra [tsy ara-dalàna] ho ana mpirotsaka iray monja.
Miaraka amin'izay, ny nahazo tombontsoa tamin'ny zavatra toy izany dia ny media sosialy, izay tsy nanan-tsahala tokoa ny anjara noraisiny tamin'ny fanamafisana ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena tamin'ny dingana samihafa amin'ny fifidianan ary ny fanaingana adihevitra maro samihafa ho an'ny daholobe. Ity lahatsoratra ity [pt] avy amin'i Tiago Doria no mamaritra ny fandraisan'andraikitry ny fampitam-baovao avy amin'olon-tsotra nampiasaina nandritry ny fotoam-pifidianana, isan'izany ny Eleitor 2010 [pt] sehatra iray ao amin'ny Ushahidi nampiasaina ho tatitra ara-tsarintany mikasika ny heloka bevava amin'ny fifidianana, ary ny 48h Democracia [pt] izay namoaka ireo video avy amin'ny mponin'ny aterineto, tatitra an-gazety sy taratasy fifandraisana momba ny fifidianana mba homena fahafaha-mandrakotra an'ireo mpampita vaovao tsy mahazatra. Ny tetikasa toy ireny, milahatra, ohatra, amin'ny sarintany iray ahitana ny sivana amin'ny fifidianana navoakan'ny Ivontoerana Knight ho an'ny Asa fanaovan-gazety manerana an'i Amerika izay ao Texas no foibeny, dia nahatafita ny famivelarana ny fanndraisan'ny rehetra anjara tao anatina fiarahaminina midadasika be.
Eleitor 2010, sehatra ao amin'ny aterineto nampiasaina hitaterana an-tsarintany mikasika ny heloka bevava amin'ny fifidianana
Maro amin'izy ireny no zavatra novokarin'olon-tsotra, izay raha tamin'ny andro taloha dia tsy nisaina mihitsy izay resa-pifidianana sy ny tatitra manodidina an'izany.
Maobe ireo nanome toky fa hanohy any anaty aterineto. Ny ankamaroany dia noforonina ho toy ny fitaovana fanaraha-maso, ary ho amin'izay indrindra no mbola hahaveloman'izy ireo aorian'ny fifidianana.
Ity horonantsary ity, novokarina tany Sapopemba, São Paulo, dia mampiseho fampielezankevitra tsy manara-dalàna nivangongo teo anoloan'ny birao iray fandatsaham-bato nandritry ny androm-pifidianana. Mbola mitohy ny fomba fanao tahaka izany, na dia eo aza ny fandraràna ny fizarazarana zavatra fampielezan-kevitra toy izany nanomboka tamin'ny 10 ora alina talohan'ny androm-pifidianana.
Sahala amin'ny hoe nanokatra varavarana ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ny habaky ny fifanakalozan-dresaka natosiky ny media vaovao ary mitondra ho amin'ny fanontaniana mikasika izay anjara toerana tanàn'ny gazety ao anatin'ny rafitra ara-politika Breziliana. Miteny koa i Carlos Castilho, manoratra ao amin'ny Observatorio da Imprensa [pt], milaza hoe:
Tsy misy mihitsy maniry ny hisian'ny jadon'ny fomba fijery tokana ny zava-misy – noho izany, raha te-hanohy ny anjara asa amin'ny maha mpamatsy vaovao azy ireo orinasan'ny fanaovan-gazety dia tsy maintsy mametraka ny fahasamihafàan'ny loharanom-baovao ho eo anivon'ny lalan-jotrany. Izany dia hanampy amin'ny fanesorana ao an-tsaina fa hoe lasa vondrona politika ny asa fanaovan-gazety.
Paula Goes sy Diego Casaes dia nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity.